Finaritra volana jona 2022 | Fitandremana Ankadifotsy
Finaritra volana jona 2022
Vao tsy ela isika no nankalaza ny Tompo noho ny fiakarany any an-danitra, fiverenany any amin'ny lapan-dRainy be voninahitra izany.
Vitany mantsy ny iraka izay nanirahan'ny Rainy Azy tety an-tany, tanteraka ny famonjena antsika. Teo amin'ny hazo fijaliana no faratampom-pitiavana nanehoan'Andriamanitra ny tena fitiavany izao tontolo izao. Tanteraka teo amin'ny hazo fijaliana ny fampihavanana antsika amin'Andriamanitra sy isika samy olombelona ary isika olombelona sy ny zavaboary.
Izao fiverenan'i Jesoa any amin'ny lapan-dRainy izao dia hanaovany tatitra ny asa vita sy ny fandraisany valin'asany, dia ny fandraisany ilay Fahefana feno eo ankavanan'ny Ray. Eo am-pelatanan'ny Tompo ny Fahefana fanapahana izao tontolo izao hareto an-tany ka hatrany an-danitra. Porofo'nizany koa ny fanomanan' ny fanirahana ny Fanahy Masinan' izay ankalazantsika ny andron'ny Pentekosta. Dia ilay Fanahy Masina mitarehin'afo (toy ny lelafo) izay midika Hery sy Fahefana. Io Fanahy Masina io no hery fahefan'Andriamanitra sy ampombany antsika fiangonana, ka ijoroana ho vavolombelon'ny Tompo, ka ampanjakany ny Fahefany eo amin'ny Famonjena izao tontolo izao. Fa hoy mantsy ny Tompo "Nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra... Indro izao momba anareo mandrakariva ambaram-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao".
Io fahefan'Andriamanitra io no hananatsika toky eo amin'ny asa fanompoana, sy ny fahatanterahan'ny fitoriana ny filazantsara.
Ry havana malala sy Kristiana havana,
Mivonona ary handeha isika, hifarimbona hanatanteraka ilay teny filamatra hoe "Vontosy filazantsara i Madagasikara, filazantsara manova ny tantara" koa aza matahotra fa ampomban'Andriamanitra antsika "Ilay Fahefany mahefa ny zavatra rehetra. Herezo ary ry kristiana havana fa momba anao Jesoa.
Ny Mpitandrina Ravaloson
Wed, 06/01/2022 - 12:44